Isku-dhafka Joy ee Minnesota Ballet Northernmost
Maxaa bilowday sannadkii 1965 iyada oo koox ka mid ah ardayda hibada leh ee ballaaran ee degaanka ay kor u qaadeen Minnesota Ballet, shirkad aad u saraysa oo hogaamineysa Robert Gardner, oo ah qoob ka ciyaara hore ee Joffry Ballet iyo Cleveland San Jose Ballet. Balletka waqooyi ee gobolka wuxuu qabanayaa shaqooyin waaweyn sida Salvatore Aiello Clowns iyo kuwa kale, xajmiga caadiga ah sida Cinderella iyo Hurdada Xoogta, Falimaha Rasuullada 2aad Swan Lake iyo Giselle, iyo wax soo saarka badan ee dalxiiska Nutcracker. Waxay sidoo kale horumarisaa shaqooyin cusub sida Heerarka Dib-u-dhaca, balasti casri ah oo loogu talagalay muusikada lagu dhajiyay muusikada ayaa ku ciyaaray afartan xarig, iyo hawlo cusub oo ay ka mid yihiin Laba Andantes by joornaalka Minnesota ee Penelope Freeh.
Minnesota Ballet waxay kor u qaadeysaa heerka farshaxanka qoob ka ciyaarka ee Duluth iyo gobolka.
Minnesota Ballet waxay kor u qaadeysaa heerka farshaxanka qoob ka ciyaarka ee Duluth iyo gobolka. Wakiilka Balanchine Trust Jerri Kumery, oo dhigay Yaa daryeela? Minnesota Ballet 2014-ka, ayaa ku wargalisay kalsoonidii, "Waxaan haystaa jaceyl aad u badan shirkaddan. Waxay u heellan yihiin iyo u heellanaanta qaabkoodu farshaxanka ay la socdaan dhalinyaradooda iyo gaajada loogu talagalay baleetku waa faafo oo aad u jaba. "
Marka laga soo tago waxqabadyada rafcaanka iyo kuwa adag, Minnesota Ballet waxay haysaa dugsi bixiya tababarka ballet-xirfadeedka kahor, xagaaga oo si xawli ah uga soo jeeda ardayda ka soo jeeda Midwest, fasal ballet oo loogu talagalay carruurta leh caqabadaha koritaanka, iyo Qeybta Dhalinyarada / Qaangaarka leh qoob-ka-ciyaarka iyo jimicsiga fasalada. Barnaamijka "Ballet's Outreach Program" wuxuu u fidiyaa carruurta laga yaabo inaysan waligood marnaba la kulmin farxadda qoob-ka-cayaarka, halka iskaashiga Ballet ee lala yeesho ururrada kale ee farshaxanka ee Duluth ay kor u qaadayaan qaab ciyaareedkooda.